Madaxweynaha Soomaaliya oo maalinta berri kula kulmaya Washington Hillary Clinton – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalinta berri oo Khamiis ah kula kulmi doona magaalada Washington Xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka Hillary Clinton.
War ka soo baxay Wasaarada Arrimaha dibada Mareykanka ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Mr Xasan Sheekh iyo Xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka Mss Clinton ay ka wada hadli doonaan arrimaha amaanka, siyaasada iyo horumarka.
Kulankan oo ah kii u horeeyay ee ay wada yeelan doonaan labada Mas’uul ayaa la filayaa in ugu horeyn ay isku bartaan Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Hillary Clinton, iyadoo arrimaha diirada lagu saari doono ka mid tahay sidii dowladda Soomaaliya loo taageeri lahaa.
Inkastoo Mareykanka aan wali wax ka bedelin dariiqii uu u soo marayay taageerida dowladda Soomaaliya, markii ay KMG ka baxday ayaa la filayaa in Madaxweynaha uu hordhigo qodobo la xiriira in Mareykanka wax ka bedel ku sameeyo qaabkii uu horay u taageeri jiray.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa la kulmi doona Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaarada gaashaandhiga Mareykanka, Hey’adda Mareykanka ugu qeybsan gar gaarka USAID iyo Gudoomiyaha Bankiga Aduunka.
Madaxweynaha ayaa la kulmi doona Jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhaqan dalkaas, isagoo u jeedin doona khudbad uu uga hadlayo xaalada Soomaaliya iyo is bedelka xilligan ka jira dalka.